यि १४ जिल्लामा स्कुल बन्द नगरे भोलिबाट लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ : प्रवक्ता गौतम - Nawalpur Dainik
यि १४ जिल्लामा स्कुल बन्द नगरे भोलिबाट लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ : प्रवक्ता गौतम
April 15, 2021 by Nawalpur Dainik
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यालयहरु तत्काल बन्द नगरे लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सरकारले अतिप्रभावित सूचीमा राखेका १४ जिल्लामा विद्यालय बन्द नगरे लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन।
उनले भने “त्यहाँ विद्यालय बन्द नगरे लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।”
सरकारले आज मात्रै जरुरी अपील जारी गर्दै १४ जिल्लालाई अतिप्रभावितको सूचीमा राखेको छ। साथै ति जिल्लामा स्कुल नजान आग्रह गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले आज अपिल जारी गर्दै पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङका विद्यालयलगायत भीड हुने ठाउँमा नजान आग्रह गरिएको छ।
उनले अबका दिन सङ्क्रमण प्रभावका हिसाबले निकै नै चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने भएकाले सबै नागरिक तथा सरोकारवाल निकाय सचेत हुँदै संवेदनशिल रुपमा जिम्मेवार बन्न पनि आग्रह गरेका छन।
अपिलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ । उनले सबैलाई सङ्क्रमणबाट जोगिन संवेदनशिल भइदिन र ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ भन्ने बुझेर जिम्मेवार बनिदिन अनुरोध गरेका छन। अपिलमा सबै अस्पतालले अनिवार्य रुपमा ज्वरो (फिवर) क्लिनिक सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले विदेशी नागरिकलाई पिसीअर नेगेटिभ आएपछि मात्र होटलमा बास राख्न अनुरोध गरेका छन। मन्त्रालयले नियमित रुपमा अस्पतालमा सेवा लिन आइरहेका सेवाग्राहीलाई कोभिड–१९ सङ्मक्रण पुष्टि भएका आधारमै मात्र अन्य अस्पतालमा पठाउने गरेर अनावश्यक दुःख हुने काम नगराउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले सबै सरकारी अस्पतालले कम्तीमा ५० प्रतिशत शय्या कोभिड–१९ सङ्क्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न र तोकिएअनुसार निःशुल्क सेवा दिन पनि अपिल गरेका छन। मन्त्रालयले बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचारमा उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ ।
Prevजति माँझ्दा पनि दाँत पहेँलो देखिन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
Nextआफ्नो भाग्य चम्काउनु छ भने यी चीजहरु मध्ये एक चिज नछुटाई घरमा राख्नुहोस् !